Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ကိုးကန်းစစ်ရေးသတင်း ( Kokang news )
at 5/15/2015 09:55:00 AM
Kachin Land and2others shared Zhengyi Kokang's post.
Zhengyi Kokang added5new photos.
Tun Tun Win added7new photos.
ကိုးကန်းစစ်ရေးသတင်း၊မေလ (၁၄) ရက်နေ.၊၂၀၁၅ ခုနှစ်၊တိန်မဲန်ရှန်တောင်ကုန်းမကျ ဟု ရှေ.တန်းရှိကိုးကန်.တပ်မ ၂၁၁ မှတပ်မှူးပြော၊
မနေ.က ညနေခင်းအထိ အမြောက်တွေနဲ.ထုနေဆဲ၊မဟာမိတပ်ဘက်မှစက်သေနတ်ကြီး တွေနဲ.ပြန်လည်ပစ်ခတ်သဖြင့် ရန်သူဘက်က အများအပြားဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်၊အဲဒီ လို၊ပစ်လိုက်ရပ်လိုက်နဲ.ညသန်းခေါင်းယံအချိန်အထိဆက်လက်ပစ်ခတ်နေဆဲပါ၊
ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ ကြည်တပ်နဲ.တက်ထိုးဖို.မနေ.ကညနေမှာပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့မတက်နိုင် ဘဲ ညနေခင်းမှာတော့ အမြောက်တွေနဲ.ဘဲ အပြင်းအထန်လှမ်းပစ်ခဲ့ပြန်တယ်၊သို.သော်၊ မနေ.ညက ဆိုရင် မီဒီယာတွေမှာ တိန်မဲန်ရှန်တောင်ကုန်းကျဆုံးသွားပြီးဘာညာ သတင်း အမှားတွေတင်ပြီး ရေးသားနေကြသည်ကိုတွေ.ရတယ်၊ ရှေ.တန်းရှိတပ်မ ၂၁၁ မှတပ်မှူး ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်ကြည်တဲ့အခါ အဲဒီသတင်းဟာ တော်တော်ရီစရာကောင်းတယ်၊ အကယ်၍ မနေ.က ကျုပ်တို.တိန်းမဲန်ရှန်တောင်ကုန်းကျဆုံးခဲ့ပြီးဆိုရင် ဒီညမှာ ဗမာစစ် တပ်ဘက်မှ အမြောက်တွေနဲ.ဆက်လက်လှမ်းထုနေစရာမလိုတော့ဘူးလေ၊အခုက၊အဲလို မဟုတ်ဘဲ အမြောက်တွေနဲ.လှမ်းပစ်နေဆဲဘဲ၊ကျုပ်တို.ဘက်ကတော့၊အဖွဲ.လေးတွေနဲ. ပြောင်းရွှေ.ပြီးကစားနေတုန်းဘဲ၊ဒီမှာ တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတုန်းဘဲ၊
ဆက်စပ်သတင်းများအရ၊ မနေ.က ကလေးတွေစာသင်ပေးနေသည့်တရုတ်စေတနာ့ဝန် ထမ်းကျောင်းဆရာဆရာမ သုံးယောက်ကို ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား ပြီးလောလောဆယ်နေပြည်တောင်သို.ပို.လိုက်ပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်နေတယ်လို.သိရတယ်၊ တရုတ်သံရုံးကလည်း ဒီကိစ္စကို လိုက်လံစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီး သုံးယောက်စလုံးမှာ တရုတ် ပတစ်စ်ပို.မပါဘဲ စစ်ပြေးစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်ကလေးငယ်တွေကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် လာရောက်စာသင်ပေးနေကြတာဖြစ်တယ်၊နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်က၊ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ ပစ်လိုက်တဲ့အမြောက်ကျဉ်ဆံကြောင့် ယူနန်ဘက်အရပ်သားကားသုံးစီပျက်ဆီးပြီးတရုတ် နိုင်ငံသားအရပ်သား နှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို.ဆိုပါတယ်၊
Courageous News May 14 news: Yesterday evening, the army continues to allies South Gate Hill resident shelling, although there are small groups of commandos deep into the rear allies to the forefront, but not close allies positions, on be allies "Shao" perceive, then shot with heavy machine guns, several people were wounded in the squad. Shelling continued until midnight, until today 12:00 sharp, South Gate Mountain area is still intermittent artillery fire.
Afternoon, Myanmar Time 4:10 or so, the army again Tianmenshan intensive artillery bombardment, artillery was deafening, the second wave of intense artillery bombardment by government forces beginning next might launchamassive infantry attacks, off Myanmar Time 5:00 shelling continues.
Evening Tianmenshan intensive shelling sound came again, but last nightavariety of media tools (micro-channel, microblogging, blog, etc.) crazy pass Tianmenshan allies positions already fall, overcome by government forces, enthusiastic users haveamessage Xiao Bian in order to be confirmed. After much effort, the site linked to the allies today Tianmenshan 211 brigade commander ofabattalion line, whether the fall of South Gate Hill seeking answers, the commander said that if we fall yesterday, and last night also need overnight gun Boom us? Our fortifications are mostly excavator construction, onlyavery small part by hand-dug, their cannon that much of. Old Myanmar official yesterday reported that "Tianmenshan be overcome," the false news, which we have seen, really funny! Shells may be more of it, since the capture of our positions are so many bomb also hit come. Yesterday we prepareateam just to be stationed in the Erlian change Yakou downabreak, something they have not played itashot, you think we're stupid enough to holdagun shot to put the position of the old Burma it? "Voice hardly ever, Tianmenshan bursts of gunfire.